Mareykanka oo Ciidamo u diray Caasimada Jubba ee Koofurta Sudan
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa 47 askari u diray magaalada Juba ee dalka Koofurta Sudan, si ay u ilaaliyaan Safaaradda Mareykanka iyo shaqaalaha ka howl gala.
Puntland iyo Jubbaland oo aan ka qeyb geli doonin Shirka Hiigsiga ee maanta Muqdisho ka furmaya
Sagal Radio Services • News Report • July 29, 2015
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qeyb gelin doonin shirka looga hadlayo barnaamijka Hiigsiga cusub ee New Deal-ka ee maanta ka furmaya magaalada Muqdishokaasoo ay shir gudoominayaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ergeyga Qaramada Midoobey Nicholas Kay.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta cod u qaadaya Mooshinka ka dhanka ah Baarlamaanka
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu cod u qaado mooshinka ka dhanka ah dhismaha Baarlamaanka Jubbaland, kadib markii Xildhibaanada Baarlamaanka ay todobaadkii hore soo gaba gabeeyeen dooda ku saabsan mooshinkaas.
Wararkii ugu dambeeyay dagaaladii Jubada Hoose
Dagaalo xoogan oo shalay dhowr jeer la isku noq-noqsaday ayaa ka dhacay deegaanka Cabdala Biroole ee duleedka magaalada Kismaayo, iyadoo la soo sheegayo qasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay.
Maamulka Jubba oo soo bandhigay dhalinyaro ku eedeeysan in ay ka tirsanyihiin Xarakada Al-shabaab
Saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo ayaa maanta lagu soo bandhigay ilaa afar dhalinyaro oo ku eedeysnaa in ay ka tirsanyihiin Al-shabaab iyo weliba waxyaalo kale oo la sheegay in ay yihin walxaha qaraxyada loo isticmaalo.